အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ကံ — Steemkr
အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ကံ
-အဝိဇ္ဇာဆိုသည်မှာ သိသင့်သောအရာကိုမသိ! မသိသင့်သောအရာကိုသိသည်ကိုခေါ်ပါသည်။ သိသင့်သောအရာမှာ သစ္စားလေးပါး( ဒုက္ခသစ္စာ! သမုဒယသစ္စာ! မဂ္ဂသစ္စာ!နိရောဓသစ္စာ! ) ဖြစ်ပါသည်။
-တဏှာဆိုသည်မှာ စွဲလမ်းတက်မက်ခြင်းအားခေါ်ဆိုပါသည်။ တချို့ က တဏှာလို့ကြားလိုက်ရင် နာဘူးကျတာကိုပဲပြေးမြင်ကြပါတယ်။ ပါတော့ပါပါတယ်။ မပြည်စုံသေးပါဘူး။ တစ်စိတ်တဒေသလောက်ပါပဲ။ အဲဒီအပြင် ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် စွဲလမ်းမှု သားသမီးအပေါ်စွဲလမ်းမှု
-ကံဆိုတာကတော့အလုပ်ပါ။ ကုသိုလ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အကုသိုလ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကိုကံလို့ခေါ်တာပါ။
အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ကံ သုံးခုကိုတော့ "သံသရာရှည်ကြောင်းတရားလို့"ခေါ်ပါတယ်။ ပါဌိလိုရေးထားတော့ လူတော်တော်များများနားမလည်တဲ့အတွက် ဆရာတော်တစ်ပါးက မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ရလွယ်ကူပြီးကဗျာဆန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့" မသိတော့လိုချင် လိုချင်တော့ပြုလုပ် ပြုလုပ်တော့ရရှိ ရရှိတော့ခံကြပေဦးတော့"လို့ ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ သံသရာတစ်လျောက်လုံး ခန္ဓာဟာ ဒုက္ခသစ္စာပါလား ဒုက္ခတုံးကြီးပါလားလို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ မသိခဲ့တဲ့အတွက် ဒီခန္ဓာရအောင်လို့ ကုသိုလ်ကောင်း
မှုတွေလုပ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ ကျတော့ဆုမတောင်းပဲ မိမိရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကြောင့်လူဘဝခန္ဓာရရှိလာကြပါတယ်။ [ခန္ဓာကိုလိုချင်တာကတဏှာ(သို့)သစ္စာနဲ့ပြောရင်သမုဒယသစ္စာပါ။]
ခန္ဓာရလာတော့ ဒီခန္ဓာဟာ ဒုက္ခတုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခများကိုခံရမြှာ်ဖစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ ဒီလောက်နဲ့လက်ခံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပြီးလေးနက်သွားအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ရောဂါဝေဒနာခံစားရမှ ဒုက္ခလို့ထင်နေကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ဖြစ်ပြီး ပျက်တာ ဒုက္ခပါ။ ဆရာတော်တောတော်များများလည်းဟောပါတယ်။" ဖြစ်ပြီးပျက်တာ ဒုက္ခသစ္စာ"တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ပျက်သဘောလေးတွေကိုမြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်တရားထိုင်ပြီး သမာဓိကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့ နာ
ကျင်ကိုက်ခဲ လှုပ်လှုပ်ရွရွစတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကို မနောအာရုံကနေ တွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဥာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်တာပါ။ [သစ္စာနဲ့ပြောရင်မဂ္ဂသစ္စာပါ] ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဒီဖောက်ပြန်မှုသဘောတွေဟာမြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပဲ ဖြစ်ပြီးပျက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။သမာဓိအားကောင်းပြီး ဒီလိုနူးညံ့တဲ့ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းတွေကို မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ ခန္ဓာဟာ ဒုက္ခတုန်းကြီးဆိုတာကိုတထစ်ချယုံကြည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုယုံကြည်မှုဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုလိုချင်စိတ်လည်း တဖြည်းဖြည်းလော့နည်းလာပြီး နောက်ဆုံးမလိုချင်တော့အထိရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ဖြစ်ပျက်မြင် ဖြစ်ပျက်မုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံး
လို့ ဆရာတော်များဟောကြားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်က မဂ္ဂသစ္စာဖြင့်ပွားများနေရမှာဖြစ်ပြီး နရောဓသစ္စာဆိုက်ဖို့ကတောဓမ္မအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာဥာဏ်ရောက်ပြီး ဆရာတော်များရဲ့ ညွန်ကြားမှုနဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန် နိရောဓသစ္စဆိုက်မှာပါ။ နိရောဓသစ္စာဆိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ သောတပန်တည်တယ်လို့ပြောတာပါ။ သောတပန်တည်ပြီးရင်တော့ အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲနေရပြီး နိဗ္ဗန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့သံသရာရှည်ကြောင်းတရားကို သစ္စာလေပါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးရေသားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။သံသရာရှည်ရင် မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သံသရာထဲလည်နေတဲ့အချိန်မှာ သုကတိဘုံမှာနေရတာ တော်တော်နည်းပါတယ်။ အပယ်လေးဘုံကသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်ကြီးပါ။အမြဲတမ်းလိုလို နေအိမ်ကြီးမှာနေပြီး သုကတိဘုံ
(လူပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာပြည်)ကို သံသရာမှာလည်နေတဲ့အချိန်နဲ့နှုင်းယှဉ်ရင် အလည်သွားသလောက်ပဲရှိပါတယ်။လူပြည်ဆိုတာလည်း အချိန်တိုင်း သံသရာလွတ်ကြောင်းတရားတွေရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုကျွန်တော်တို့ လူ့ပြည်အလည်ရောက်နေချိန်မှာ သံသရာလွတ်ကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရလည်း ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူး။ ရောက်တုန်း ရတုန်း ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အပယ်လေးဘုံဖြစ်တဲ့ မိမိတို့ရဲ့ထာဝရနေအိမ်ကြီးကိုပြန်သွားမှာလား? သံသရာကလွတ်အောင်ကြိုးစားမှာလား?
ဖြေကြည့်ကြပါလို့ မေမြန်းရင်းနိဂုံးချု ပ်အပ်ပါတယ်။
myanmar buddha knowledge
ဘာသာ​ရေးစာ​ပေ ​ဆောင်းပါး ​ရေးတဲ့သူ​တွေကို ကျွန်​​တော်​ချီးကျုးတယ်​ဗျာ ဘာဖြစ်​လို့လဲဆို​တော့ ​တော်​​တော်​​လေးစာ​ပေနှံ့စပ်​မှဖြစ်​တာ
သံသရာမှာ အလည်သွားနေတဲ့ သံသရာခရီးသည်တွေပဲ
ဌာနေအိမ်အပယ်လေးဘုံကနေ လူပြည်ကိုအလည်လာတာပါ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါသွားရင် မိမိရဲ့ဌာနေအိမ်ကို
တန်‌ဘိုးရှိ‌သော Post တစ်‌ခုပါအစ်‌ကို။‌ပြော ပြ‌ပေးလို့‌ကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်တယ်ဆရာ မနေ့က မယ်ကြည် ထီပေါက်မလား မျှော်နေတာရယ် ဟီး😁😁
သစ္စာလေးပါးကို တစ်ခုချင်းစီ သေသေချာချာ ရှင်းပြထားတာ မှတ်သားရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သိပြီး ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံ ကြိုးစားဖို့ရန် မေးခွန်းလေးပါပေးသွားသော အစ်ကိုမောင်မောင်လတ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
You gota4.19% upvote from @brupvoter courtesy of @mgmglattt!
ဘာသာရေးနဲပပတ်သက်လို့ နည်းနည်းကြောက်နေလို့ နားထားတယ်၊ အစွန်းလွတ်အောင်မနဲရှေင်ရေးနေရတယ်သားရေ၊ လွဲသွားမှာလည်းစိုးရ်ိမရသေးတာ။